Iifomati - Indlela yokudlala iiDuplet zomculo
Inkcazo ye-Musical Duplet
I- duplet - uhlobo lwe- tuplet- liqela lokubhala i-note, elifikelela kwindawo emithathu ye- note-type . Umzekelo:
Isikhumbuzo sesibhozo sesibhozo sichaza ubude besithathu (okanye "ngokuchanekileyo") amanqaku ayisibhozo.
Izibini ezilishumi elinesibhozo-ncazo zithatha ubude beenkcukacha ezintathu (okanye i-note-eight-note).
● Jonga ukubonwa kule mizekelo ingentla
Qaphela ukuba ngelixa ezininzi i-tuplets zahlula isithintela kwiindawo ezincinci, i-duplet iyandisa ubude bamanqaku ayo.
Ngokomzekelo, i- triplet yenza amanqaku amathathu kwixesha ezimbini, ngoko ukunciphisa inqaku ngalinye ngaphakathi kwe- 2 / 3 ubude bayo bokuqala. Iphepheni inamandla amabini amanqaku ukuba athathe indawo yezithathu , okwenza ukuba alinganayo 1 1/2 ubude bawo bokuqala.
Iifutshane zenza isigqi sesigxina esingaphantsi kwengoma. Ngelixa lingaqhelekanga lisetyenziswe, linokubonakala kwiibhuloho, kodwa zihlala zisetyenziswa kwi piyano ye-jazz.
I-Duole (Ger) yomculo oyiKhobhodi yokuThelekisa
Dlulisa amehlo kwiDafa kwiD:
▪: "ngaphandle kwento"; ukuzithoba ngokukhawuleza amanqaku emva kokuthula okupheleleyo, okanye i-crescendo ekhuphukayo ukusuka kwikho.
▪ i- decrescendo : ukunciphisa kancane umthamo womculo. I-decrescendo ibonakala kwimiqulu yomculo njengengqamaniso yokunciphisa, kwaye idlalwa uphawu lwe- decresc.
▪ izidlo : "ngokukhawuleza"; ukudlala ngomgca wokukhanya kunye nokuziva umoya.
▪: kakhulu mnandi; ukudlala ngendlela ekhethekileyo. I-Dolcissimo yinto ephakamileyo ye "dolce."
Ukufunda iCiano yoMculo
▪ Uxwebhu lweMpawu zoMculo iThalayibrari
▪ Indlela yokufunda i-Piano Notation
▪ Ukuboniswa kwePiano Chords
▪ I- Tempo Iimigaqo eziQulunqelwe ngokukhawuleza
Izifundo zePiano zokuqala
▪ Iinkcukacha zePiano Keys
▪ Ukufumana i-Middle C kwiPiano
▪ Ukwazisa kwiPiano Fingering
▪ Indlela yokubala ezintathu
▪ Imibuzo yeMculo kunye novavanyo
Ukuqalisa kwiiKhobho zeeNbhobho
▪ Ukudlala iPiano kunye neKhobhoji yoMbane
▪ Uhlala njani kwiPiano
▪ Ukuthenga iPiano esetyenziswayo
Ukwenza iPiano Chords
Iintlobo zeChord kunye neMpawu zazo
▪ I- Piano Chord Fingering ebalulekileyo
▪ Ukuthelekisa iiMeko eziMkhulu neziNcinane
▪ Ukunciphisa amaChords & Dissonance
Zonke Ngezandla Zisayina
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nabachaphazelekayo kunye namasayinithi angundoqo.
Sebenzisa i-locator key signature locator ukuchonga okanye ukukhangela kabini iqhosha lakho.
Kukho rhoqo iisitshixo ezimbini ezinxulumana ngakumbi kunanoma yiphi enye ikhiye. Fumana ukuba kuthetha ukuthini oku.
Ukuthelekisa iMajor & Minor
Iimpawu ezincinci kunye nezincinci zidla ngokuchazwa ngokwemvakalelo okanye imvakalelo. Indlebe iqala ukuqonda ukuba ezinkulu kunye ezincinci zinobuntu obuhlukeneyo; umzekelo obalaseleyo xa ezi zibini zidlalwa ngasemva. Funda kabanzi malunga namanqanaba amakhulu kunye namancinci.
Oku ngakumbi kwiingoma zomculo:
I-6 Enharmonic Key Signatures
Ukuba uqhelane nesangqa sesithandathu (okanye uyazi nje indlela ejikeleze iisayinithi eziphambili) usenokuba uqaphele iimpazamo ezimbalwa. Ezinye izitshixo-ezifana ne-B-sharp and F-flat-major - zibonakala zingekho, kanti ezinye zihamba ngamagama amabini
Isangqa sesihlanu sibonisa kuphela izikali zokusebenza. Kodwa, ukuba sandisa kwipateni yayo, sinokubona ukuba empeleni kuninzi ukuhamba okungapheliyo, ngoko akukho siphelo kumathuba omculo.
Itheyibhile yokuSebenza kunye noKhiye ongasebenzi
Bona okubonakalayo ecacileyo zeziphi iimpawu eziphambili ezisebenzayo kwaye eziya kuba zikhulu.
Indlela yokuLahla nokuLawula iDice kwiCraps
Inkcazo ye-Tempo di Menuetto
Yiyiphi i-Orthogonal Lines kwiDraw?
Izinto zokuDraba: Izinto kunye noBomi
Indlela Ebonakala Ngayo Echaphazela Imidwebo Yakho Nezobugcisa
Indlela yokuLoba iintlanzi - Intshayelelo yoLwandle lokuLoba 101
Iiklasi zeKrismesi ze-Classic zeeSigaba ze-ESL
Iimfazwe eziPhambili zeMfazwe ezili-10
Konke malunga namalungelo okukhupha
I-Galley okanye iKorityor Kitchen Layout